Yakachipa Sheet simbi zvikamu laser yekucheka fekitori nevatengesi | Ouzhan
Shandisa yakakwirira-simba arambe achirema Laser danda kuvhenekera zvinhu kuti zvidimbwe, kuitira kuti zvinhu zvinokurumidza kupisa kuti vaporization tembiricha, uye unoita kuti ive kuita maburi. Sezvo danda rinofamba pamusoro pezvinhu, maburi anoramba achigadzira masileti ane hupamhi hwakanyanya (senge 0.1 mm). Pedzisa kucheka kwemashoko acho.
Sheet simbi laser yekucheka maitiro-tsika chaiyo pepa simbi zvikamu kugadzira
Ouzhan inokupa iwe neshandisa renji yesimbi simbi yekucheka muchina: muchadenga, kuvaka ngarava, michina yekurima, chaiyo michina, zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza, zvekurapa zvekushandisa, midziyo yekusimbisa muviri, fenicha nemidziyo yemumba, kitchenware, zvigadzirwa zvemagetsi, marambi nemarambi, skrini, simbi mhizha, aruminiyamu chibhokisi, aruminiyamu keteni madziro, magetsi kabhoni, mota indasitiri, kushambadzira indasitiri, jira simbi kugadzira uye mamwe maindasitiri. Iyo laser yekucheka muchina inogona kugadzirisa: kabhoni simbi, simbi isina simbi, silicon simbi, chitubu simbi, chiwanikwa simbi, manganese chiwanikwa, titanium chiwanikwa, aruminiyamu, aruminiyamu chiwanikwa, aruminiyamu ndiro, kwakakurudzira ndiro, electrolytic ndiro, pickling ndiro, mhangura nezvimwe zvinhu.
Zvakanakira Ouzhan jira simbi Laser kucheka zvikamu
- Kusabatika kugadzirisa
- Diki deformation yezvidimbu slits
- Yakanyanya kuchena ruvara
- Yakanyanya simba simba kuwanda
- Yakachena, yakachengeteka uye haina kusvibiswa
Ouzhan OEM yakagadziriswa sheet simbi laser yekucheka sevhisi-China Shanghai sheet simbi laser yekucheka zvikamu mugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakakwira-yakajeka sheet simbi laser yekucheka zvikamu zvine yakagadzikana uye yakavimbika mhando inogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakakwana kwesheet simbi laser yekucheka muchina zvikamu. Uye zvakare, iyo jira simbi laser yekucheka zvigadzirwa zvinopihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye zvinogona kushandiswa mune dzakasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidzana mutengo masevhisi epepa simbi laser yekucheka uye laser yekucheka zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Zvakanakira jira simbi Laser kucheka
⑴ Uchishandisa matatu-matatu mativi laser yekucheka sisitimu kana kumisikidza maindasitiri robhoti kutema nzvimbo nzvimbo makakombama, kukudziridza dzakasiyana-nhatu-dimensional yekucheka software kuti ikurumidze maitiro kubva kudhirowa kucheka mativi.
To Kuti uvandudze kugadzirwa kwehunyanzvi, tsvagisa uye nekuvandudza akasiyana akasarudzika ekucheka masisitimu, zvinhu zvinoratidzira masystem, akaenzana mota mota dhizaini masisitimu, nezvimwe, uye yekumhanyisa kumhanya kweyekucheka system yapfuura 100m / min.
To Kuti uwedzere kushandiswa kweinjiniya michina, indasitiri yekuvaka ngarava, nezvimwewo, ukobvu hwekucheka yakaderera kabhoni simbi hwapfuura 30mm, uye kukosheswa kwakanyanya kwakabhadharwa kune iyo tsvagiridzo pane maitiro tekinoroji yekucheka yakaderera kabhoni simbi ine nitrogen yekuvandudza iyo yekucheka mhando yekucheka gobvu mahwendefa. Naizvozvo, kuwedzera iyo indasitiri yekushandisa munda we CO2 laser yekucheka muChina uye kugadzirisa mamwe matambudziko ehunyanzvi mukushandisa nyowani ichiri nyaya dzakakosha kune mainjiniya uye mahunyanzvi.
Ndeapi maficha epepa yesimbi laser kucheka
–Metal Kucheka: Laser kucheka kunogona kuwana yakachena, inotsvedzerera uye yakasimba kutema kupfuura zvemagetsi kugadzira. Kufanana nemichina, inogona zvakare kuverengerwa uye kutungamirwa nekombuta, zvinoreva kuti iyo laser yekucheka muchina inogona otomatiki kugadzira nhamba hombe yesimbi zvikamu zvemabhizimusi senge mota nemakomputa.
-Reflective simbi: Iyo mwenje inoratidzira haizokuvadze iyo optical tambo. Simbi dzakadai sealuminium, sirivheri, mhangura, uye goridhe zvese zvinoratidza uye zvakakosha mukugadzira mota uye semiconductor.
–Medical Science: Kucheka kweLaser kunoita basa rakakosha muindasitiri yezvokurapa. Muindasitiri yezvokurapa, yakanyanyisa kukwirisa uye kuomarara kwekuremerwa kwakakosha. Nekuda kwekuda kwemaindasitiri ekurapa ekugadzira huwandu hwehuwandu, iyi tekinoroji inosangana nezvavanoda nekuti inogona kutevedzera zvigadzirwa, zvese nenzira kwayo uye nekukurumidza.
Mhando zhinji dzezvigadzirwa zvekurapa dzakatangira mukucheka kwelaser, kubva pamwoyo nemidziyo yemapfupa kune ekuvhiya zvigadzirwa. Nekucheka laser, izvi zvishandiso zvinogona kugadzirwa nekumhanyisa kumhanya pasina kubayira chokwadi.
Zvakanakira Ouzhan jira simbi Laser kucheka basa
- Yese chaiyo machira simbi laser yekucheka inoenderana neyakaomarara mhando yekutarisa.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli yezvakanaka pepa simbi laser yekucheka kugadzira.
Pashure: OEM jira simbi vachikotama zvikamu
Zvadaro: Custom jira simbi Laser kucheka zvikamu